Evaporative Condenser Nsukka - China Evaporative Condenser Suppliers & Factory
SEC usoro evaporative condenser nwere mmezi ọwa n'ime akụrụngwa, Mmezi pesonel nwere ike mfe na ngwa ngwa ịgbanwe mmiri baffle, ịkwanyere okpomọkụ mgbanwe filler, wdg, ọ dị mfe inyocha na ịnọgide na-enwe maka ofufe moto (mfe n'ọkwá maka nhọrọ ngwa).
SLC usoro evaporative condenser bụ kọmpat na imewe na e kpọkọtara tupu njem, si otú na-azọpụta njem na-akwụ ụgwọ na elu na-akwụ ụgwọ chọrọ maka na-na saịtị nzukọ.
A na-ebugharị usoro nke ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-etinye n'ime ihe. SVC usoro evaporative condenser dịkwa nnọọ adaba ịnọgide na-enwe, na shei efere na abụọ nke ofufe nwere ike wepụrụ, mfe ịnweta dum belt mbanye usoro.
STC usoro evaporative condenser adopts n'elu mmiri imewe, na axial eruba ofufe na-arụnyere na n'elu, na moto draịva impeller ozugbo.
Condenser bụ otu n'ime ihe ndị na-agbanwe ngwa ngwa nke usoro friji. Ọrụ ya bụ ime ka ikuku dị elu na gas na-ekpo ọkụ na-eme ka mmiri dị n'ime mmiri.
1.Snowkey pụrụ iche Akara teknụzụ
2.Na-eji teknụzụ Japan, United States na-ebubata akara mkpuchi polyurethane dị elu na ọnọdụ dị elu / dị ala na-eguzogide njirimara, mgbe nkwenye siri ike, ọdịdị dị mma, ịda mbà dị mma, iji nweta nsonaazụ ogologo oge, a na-eji usoro a n'ime usoro niile .